म विदेशबाट आएँ भन्दैमा छिमेकीले मेरो घरको बाटो हिँड्न छाड्नु पर्छ र ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असार ३०, २०७७ मंगलबार १८:३३:२१ | मेरो कथा मेरो भोगाई
श्रेया गजमेर, झापा (होम क्वरेण्टीनबाट) ।
वैदेशिक रोजगारी, आफन्त भेटघाट तथा घुमफिरको लागि नेपाल बाहिर रहेकाहरु कोरोनाको जोखिममा मात्र परेनन् । सीमा नाका र उडानहरु बन्द हुँदा जहाँ थियौं, त्यही रोकियौं । तर ढिलै भए पनि समस्यामा परेकाको स्वदेश फिर्तीका लागि सरकारले पहल गरेपछि हामी आफ्नो देश, आफ्नो घरमा फर्कन सफल भयौं ।
अहिले नेपाल मात्र होइन विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । तर यो बेलामा थाहा हुँद हुँदै पनि हेलचेक्राईं गरेका कुरा भने धेरै छन् ।
हो हामी विदेशबाट नै आएको हौं । तर हामीले सरकारले तोकेको सबै नियम पालना गरेर, जाँच गरेर क्वरेण्टीनमा बसेर रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आएका छौं ।
तर यहाँ होम क्वरेण्टीनमा बस्दा आफ्नैले हामीसँग गरेको व्यवहार देख्दा उदेक लाग्छ । उनीहरुले त हामी नै कोरोना भाइरस हौं झैं व्यवहार गर्छन् । के विदेशबाट आउने सबै कोरोना भाइरस हुन र ? यस्तो त कतै भएको जस्तो लाग्दैन । तर यहाँ भएको छ ।
परदेशमा छँदा मेरो गाउँ जान पाए त मेरो मान्छे, मेरो माटो, मेरो देश भनेर छाती फुलाएर फर्कनेलाई किन यस्तो गर्नुहुन्छ ? परदेशमा छँदा आफ्नो गाउँ, आफन्त र देश सम्झेर दुःखसँग लड्ने आँट गर्नेलाई यहाँ आउँदा तिनैले रुखो व्यवहार गर्दा कस्तो लाग्दो हो ? तपाईँहरु सोच्न पनि सक्नुहुन्न ।
परदेशमा पनि दुःख, स्वदेशमा पनि अपमान । कतिपयलाई तपाईँहरुले गरेकै व्यवहारले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । मानसिक तनाव हुन्छ । स्थिति जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसैले म भन्छु, विदेशबाट फर्कने हामीलाई माया गर्न नसके पनि घृणा नगरौं ।
विदेशबाट आउने हामीलाई सुरक्षाकर्मीदेखि स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैले माया, सदभाव अनि सकारात्मक सोचाइको विकास गराउनुभयो । विभिन्न क्रियाकलाप गराएर क्वरेण्टीनमा बस्दा हँसाउनुभयो । कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आउनमा सहयोग गर्नुभयो । कसैलाई सङ्क्रमण भएमा उपचारमा खटिनुभयो । कोरोनालाई जित्न सक्ने बनाउनुभयो ।
तर तपाईँहरुलाई नै गाउँ समाजमा गरिने व्यवहारले अचम्म लाग्छ । यस्तो अमानवीय व्यवहारले मन कस्तो हुन्छ होला ? अनि कस्तो मानसिक असर पर्छ होला ? म त सोच्न पनि सक्दिनँ । गाउँसमाजले एक पटक सोचोस् भन्ने लाग्छ मलाई ।
हामी कोरोना नेगेटिभ भएपछि मात्र घरमा आएका हौं । किनकी तपाईँलाई जति आफ्नो स्वास्थ्यको माया छ, त्यति नै मलाई पनि मेरो परिवार र मेरो समाजको माया छ ।
तर म विदेशबाट आएको भन्दैमा बोलचाल नै बन्द गर्नुपर्ने अनि मेरो घरको आसपास नै आउन नहुने किन होला ? के नेपाली समाज अब यो अवस्थामा आइपुगेकै हो त ? हाम्रो मानवीय मूल्य, मान्यता, सामाजिक सद्भाव, भाइचारा कोरोनासँगै सकिएको हो त ?
गाउँ समाज अनि देश भनेको हामी आफैं नै हौं । त्यसैले विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि आफ्नो घर, आफ्नो परिवार सम्झेर आएका म जस्ता आम नेपालीलाई मानसिक तनाव दिनुको सट्टा हौसला अनि सकारात्मक सल्लाह सुझाव दिए कति जाति हुन्थ्यो !
कोरोना त्यस्तो जटिल रोग होइन भन्ने मलाई लाग्छ । सकारात्मक सोचाइ अनि राम्रो खानपानबाट यो रोगलाई सजिलै जित्न सकिन्छ । घर परिवार, गाउँ समाजबाट गरिने भेदभाव र अपमानले कमजोर बनाउँछ । त्यसैले विदेशबाट फर्किने हुन् या अरु कोही, कसैलाई पनि यस्तो विभेद नगरौं । सकिन्छ माया बाँडौं, सकिंदैन भेदभाव नगरौं ।
हजुर को विचार पढेर निकै राम्रो लाग्यॊ। हाम्रो समाज कुन दिशा तिर जदैछ। God bless my country.